त्रिभुवन विमानस्थलबाट कुनै जहाज समयमा उड्दैनन्, परिचयपत्र लुकाएर हिँड्छन् क्यानका कर्मचारी! :: BIZMANDU
त्रिभुवन विमानस्थलबाट कुनै जहाज समयमा उड्दैनन्, परिचयपत्र लुकाएर हिँड्छन् क्यानका कर्मचारी!
प्रकाशित मिति: Nov 8, 2017 5:03 PM
काठमाडौं। टुरिस्ट सिजन सुरु भएकाले त्रिभुवन विमानस्थलमा यात्रुहरुको चाप अघिपछिभन्दा बढिसकेको छ। एयर ट्राफिक बढ्न थालेसँगै त्रिभुवन विमानस्थलमा फ्लाइट डिलेको समस्या पनि सुरु हुन्छ।
बिमानस्थलमा हाल डोमेस्टिक, इन्टरनेशनल, रेस्क्यु, र चार्टर फ्लाइट विहान ६ बजेदेखि मध्यरात १२ बजेसम्म नियमित संचालनमा छ । विमानस्थलका प्रवक्ता प्रेमनाथ ठाकुरका अनुसार कहिले मौसमले साथ नदिँदा बिहान एयरपोर्ट खुल्दैन, त्यस समय भिएफआर (भिजुअल फ्लाइट रुल्स) फ्लाइट सम्भव हुँदैन र आइएफआर (इन्सट्रुमेन्टल फ्लाइट रुल्स) फ्लाइट संचालनमा आउँछ। आइएफआर फ्लाइट संचालनमा आउँदा ‘सेपरेसन हाइ’ हुने भएको कारणले अन्य जहाजहरुको उडान समेत डिले हुने गरेको ठाकुरको भनार्इ छ।
टुरिस्ट सिजनले गर्दा विमानस्थलमा पर्यटकहरुको अत्यधिक चाप भएको र सबै विमानहरु आफ्नै सेड्युलमा संचालन हुन खोज्दा फ्लाइट डिले हुने गरेको उनले जानकारी दिए। डोमेस्टिकमा त यात्रुहरुको बिजोग नै हुन्छ। उनी भन्छन्- ‘लामो समयसम्म फ्लाइट कुर्नुपर्दा यात्रुहरुले भोग्ने कठिनाइ देख्दा परिचय पत्र नै लुकाएर हिँड्नुपरेको छ। यात्रुहरुलाई प्रभावकारी सेवा दिन नसक्दा हामीलाई पनि ग्लानी हुन्छ।' उनी गम्भिर देखिए।एयर ट्राफिक कन्ट्रोलका कर्मचारी तथा बिमानस्थलका कर्मचारीहरुले जति नै प्रयास गरेपनि एउटै जहाज पनि समयमा उडान नभएको ठाकुरको भनार्इ छ।
'अब सेपरेसन राख्नै पर्यो। राखिएन भने हवाइ दुर्घटना हुने अधिक सम्भावना हुन्छ त्यसैले हामीलार्इ फ्लाइट डिले गराउँदै विमान उडान र अवतरण गराउनु पर्ने बाध्यता छ।'-उनले भने। हरेक बर्ष टुरिस्ट सिजनमा फ्लाइटहरु डेढ देखि दुई घण्टासम्म डिले हुने गरेको उनी बताउँछन्।नयाँ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरु थपिने क्रम छ तर विमानस्थलको साधन स्रोत भने उही । सँधै विमानस्थलमा पर्ने चापलार्इ दिर्घकालीन समाधान दिन अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने वा डोमेस्टिक फ्लाइटका लागि अलग्गै बिमानस्थल बनाइ त्रिभुवन विमानस्थलबाट अन्तराष्ट्रिय उडानमात्र गर्नुपर्ने प्रवक्ता ठाकुरको भनार्इ छ।
हाल त्रिभुवन विमानस्थलमा २९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरु संचालनमा छन् जसमा दैनिक एक सय हवाइजहाजहरुले उडान भरिरहेका छन्। विभिन्न एयरलाइन्सका तीन सय पचासवटा डोमेस्टिक जहाजहरु पनि दैनिक संचालनमा आइरहेका छन्। यस अनुसार त्रिभुवन विमानस्थलमा दैनिक ४ सय ५० देखि ५ सय जहाजहरुको उडान भैरहेको तथ्यांक छ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा जम्मा ९ वटा अन्तर्राष्ट्रिय पार्किङ स्थल छ भने चेकिङ काउन्टरहरुपनि सिमित छन्। सिमित साधन र स्रोतबाट धेरै यात्रुहरुलार्इ सेवा दिनुपरेकाले कर्मचारीहरुलार्इ पनि भ्याइनभ्याइ भएको प्रवक्ता ठाकुर बताउँछन्। नागरिक उड्ययन प्राधिकरणका प्रवक्ता विरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार त्रिभुवन विमानस्थलको पूर्वाधार विकासका लागि काम चलिरहेको छ। हाल बिमानस्थलको रनवेको पूनर्निर्माणकालागि चिनियाँ कम्पनी साङ्जी, भवन र युटिलिटि निर्माणकालागि प्रेया शर्मा आशिष जोइन्ट भेन्चर कम्पनीले काम थालिसकेको श्रेष्ठले जानकारी दिए।उनका अनुसार तीनवटा प्याकेजमा गर्न लागिएको विमानस्थलको मर्मत तथा निर्माण आगामी २ वर्षमा सकिनेछ।